Maitiro eBlockchain Anowedzera Sei Shanduko muE-Commerce Indasitiri Martech Zone
Kufanana nemabatirwo anoitwa e-commerce nemahombekombe ekutenga, gadzirira imwe shanduko muchimiro che blockchain tekinoroji. Chero zvingave zvinonetsa mu e-commerce indasitiri, iyo blockchain inovimbisa kugadzirisa zvakati wandei uye kuita kuti bhizinesi rive nyore kumutengesi pamwe nemutengi.
Kuti uzive kuti blockchain ichave nerubatsiro rwakanaka kune e-commerce indasitiri, kutanga, iwe unofanirwa kuziva nezve iyo zvakanakira blockchain tekinoroji uye matambudziko ari kunetsa e-commerce indasitiri.
Ndezvipi zvakanakira blockchain tekinoroji?
Iyo blockchain ndeye yakatemerwa yakaparadzirwa ledger database. Iwo ma transaction nedata zvinobva zvango chengetwa mune yemubatanidzwa node.
Iwo mashandisirwo ayo anofanirwa kuiswa mudhagi kana bhuroka anosimbiswa nevamwe vatora chikamu. Izvi zvinoita kuti ive yakavimbika.
Izvo zvekutengesa zvinogona kungonyorwa nevatori vechikamu vane mvumo kuti zvive zvakachengeteka uye kukanganisa-chiratidzo.
Iwo madhairekitori akaverengerwa padhijitari kuitira kuti iyo data irambe yakachengeteka.
Iyo yekudyidzana-kwehukama hwezvidhinha kunoita kuti zvinyanye kusakwanisa kuchinja zvirimo mubhokisi.
Iwo ma transaction kana iyo data inguva yakadhindwa. Saka iyo yekutengesa inogona kuteedzerwa kune yayo yekutanga yekupinda zuva
Zvibvumirano zvine hungwaru ndezve uko kutengeserana kunoitiswa otomatiki kana uye chete kana seti yemamiriro akasangana.
Sei blockchain ichashandura iyo e-commerce indasitiri?
Kubhadhara kwakaitwa zvakachipa - Mari yekubhadhara inobhadharwa nemakambani emakadhi nemabhangi akawandisa. Pamusoro peizvi, e-commerce mapuratifomu zvakare anobhadharisa mari kubva kune vatengesi kune chero chiitiko chakaitwa. Iyo Blockchain teknolojia yakagadzirirwa kudzikisa mari yekugadzirisa uye mari yekutengesa nekupa yakaderera-mutengo kutengeserana. Iwo ekuchengetedza matanho achave zvakare akakwirira kuitira kuti mutengesi amire kuti awane kubva pairi.
Supply Chain Kuchengeta uye Inventory Kudzora - Kupiwa kwezvinhu kubva kumutengesi kuenda kune e-commerce chikuva uyezve kubva ipapo kuenda kumutengi ibasa rinonetesa kutarisirwa. Dhipatimendi rechitoro rinofanirwa kuongorora masheya ari kuzosvika uye ayo ari kuzounzwa. Panogona kuve nedambudziko rekubiridzira nezvakaderera zvigadzirwa zviri kupihwa. Asi ne blockchain tekinoroji, iyo e-commerce chikuva inogona kuteedzera kufamba kwezvinhu kuenda nekudzoka kubva munzvimbo yayo. Zvakare, sezvo iyo yakanyorwa data iri pachena, chero kusatendeka muhuwandu kana mhando inogona kuteverwa. Ichi chichava chikomborero kumutengesi, e-commerce chikuva uye mutengi.
Inventory Kudzora - Rimwe rematambudziko mubhizinesi rega rega rine chekuita nechigadzirwa ndere iro rekugadzirisa zvinyorwa. Zvinhu zviri mudura zvinofanirwa kuzadzikiswa uye kutarisirwa. Pano, blockchain inogona kubatsira iyo e-commerce indasitiri mune yekuverenga manejimendi. Nekuwedzera zvibvumirano zvehungwaru mu blockchain, iyo hesera inogona kutarisirwa. Izvo zvinhu zvinokwanisa kuodha otomatiki kubva kumutengesi kana pre-yakatsanangurwa muganho (mashoma muganho) wasvika. Izvi zvinoona kuti chitoro hachina zvigadzirwa zvakawandisa kana kuti zvinoramba zviripo.
Dziviriro yedata - Iyo data inounganidzwa neiyo e-commerce mapuratifomu ramba uri mudura ravo. Asi mutengi arasikirwa nekuti iyi data yakawanda-nguva inoshandiswa zvisirizvo neaya e-commerce hofori. Zvakare, pane zvese zvingangoitika kuti system inobiwa uye dhatabhesi rinobiwa. Ruzivo rwakashata senge kiredhiti kadhi nhamba uye neruzivo ruzivo zviri panjodzi. Iwo e-commerce mapuratifomu haangochengete ruzivo rwevatengi chete asi rweavo vatengesi zvakare. Asi iine blockchain tekinoroji, iyo data iriko mune yega kodhi node. Iyo yakasarudzika system uye iyo data haigone kuchinjwa kana kurasikirwa.
Kuvimbika Nemubairo - Iine blockchain, zvinova nyore kuteedzera iyo yakazara kutenga inoitwa nemutengi uye vanovimbika mamaki vakawana. Nhoroondo yekutenga uye mapoinzi akawanikwa uye akanunurwa anochengetwa zvakachengetedzeka mudhairekitori re blockchain. Iyo mibairo yezvikwereti uye poindi mamaki anogona kugadziriswa otomatiki kuburikidza nezvakanaka zvibvumirano.
Waranti uye Kutenga Mareti - Nekutenga, kunouya musoro wekunyatso chengeta kadhi yewarandi uye risiti yekutenga. Iyo blockchain ichave inowedzera kuchengetedza risiti yekutenga kuitira kuti masevhisi ewaranti awanikwe. Iyo blockchain inogona nyore kuchengeta uye kuronda iyo data nokudaro ichibvumidza humbowo hwevaridzi vezvigadzirwa kana masevhisi.
Ongororo dzechokwadi - Ongororo dzakagadzirwa pane e-commerce chikuva zvinoenderana nemubvunzo wakawanda. E-commerce zvitoro hazvina kuvhurwa nezve ongororo dzakatumirwa ipapo uye hapana anoziva kana chiri chechokwadi. Nekusanzwisisika kwese nezve ongororo, tekinoroji ye blockchain inobatsira kugadzirisa dambudziko rekudzokorora. Izvo zvinobatsira kuongorora ongororo uye kuziva kana chiri chechokwadi uye chakavimbika chimwe. Vatengi vanogona kukurudzirwa kunyora nezve zvigadzirwa zvavanotenga. Iyo mibairo, uyezve, inogona kuitwa kuburikidza ne madhijitari wallets pane blockchain.
Dzimwe nzira dzekubhadhara - E-commerce masaiti anopa vatengi vavo nzira dzakasiyana dzekubhadhara senge COD, makadhi uye nharembozha. Asi kana cryptocurrency ikaunzwa senzira yekubhadhara, saka inopa zvakwakanakira zvakawanda pamusoro petsika dzenzira dzekubhadhara. Iyo nzira yekubhadhara inokurumidza uye yakavimbika. Mari yekugadzirisa yakaderera. Iko hakuna kutya kwekuti kutengeserana kuchinjwe uye kushandiswa zvisirizvo sezvazvingaitwe nekadhi rekubhadhara. Iine cryptocurrency, kudiwa kwekubvumidzwa-kwechitatu-kubviswa.
Iyo e-commerce indasitiri inokwikwidza zvakanyanya, uye zvitoro uye e-commerce mawebhusaiti ari kutsvaga nzira uye nzira dzekugara pamberi pevezera ravo. Nekudaro, mabhizinesi anofanirwa kukumbira hunyanzvi hwemabhizinesi matekinoroji kuti arambe akakodzera mumakwikwi.
Iyo blockchain tekinoroji inopa iyo chaiyo fomati yekuita kuti zvinhu zvive nyore uye zvakapfava. Nekombiki ye blockchain, vese vane chekuita mu e-commerce indasitiri vane chokwadi chekubatsirwa mukufamba kwenguva.
Tags: kumwe kubhadharablockchaincryptocurrencyData Securitye-zvokutengeseranaecommerce kubhadharakuongorora zvinyorwakuvimbikanzira dzokubhadharakutenga maresitiReviewsmibayiromangetani ekupavimbiso